सेयर बजारमा हुनसक्ने अपराधʽसेयरको भण्डारीकरणʼ बाट बच्नुहोस् ! - Arthatantra.com
सेयर बजारमा हुनसक्ने अपराधʽसेयरको भण्डारीकरणʼ बाट बच्नुहोस् !
हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौ । तपाईलाई थाहा छ, सेयरको भण्डारीकरण गरेर पनि बजारमा अनियमितता गर्नेहरु सक्रिय हुने गरेका छन् । निश्चित व्यक्ति वा समूहले फाईदा लिने गरि सेयर बजारमा यी र यस्ता अनियमितता भईरहेका हुन्छन् । जसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई भने मर्का पारिरहेको हुन्छ ।
के हो ʽसेयरको भण्डारीकरणʼ ?
यो यस्तो कारोबार हो, सेयर कारोबारमा संलग्न व्यक्ति वा समूहले बजारमा बिक्रीका लागि आएको कुनै एक कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर खरिद गर्दछन् । यसले त्यस कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर कुनै एउटा व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित बन्नपुग्छ । अब यसो भएपछि बजारमा सेयरको अभाव हुनजान्छ अर्थात् आपूर्ति नै ठप्प बन्न पुग्छ ।
अब त्यस कम्पनीको सेयरको आपूर्ति कम भई माग बढ्दा सेयरको मूल्य क्रमशः बढ्दै जान्छ । यसपछि माग बढ्दै जाँदा यस क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति वा समूहले सानो–सानो संख्यामा सेयर बिक्री गर्न थाल्दछन् । बजार अझ उचाईतर्फ जान्छ । अब त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्नहरुले विस्तारै बजारमा आपूर्ति बढाउँदै लैजान्छन् । आपूर्ति बढ्दै जाँदा सेयरको मूल्यलाई एक उच्चत्तम विन्दुमा पुर्याएपछि त्यस कारोबारमा संलग्न व्यक्ति वा समूहले सबै सेयर बिक्री गर्दछन् ।
यसरी सेयरको भण्डारीकरण गरेर बजारमा एक किसिमको अपराध हुने गरेको छ । जसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु भने संधै मर्कामा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले यी र यस्ता कारोबारमा संलग्न हुने व्यक्ति वा समूहहरुप्रति तपाई साधारण लगानीकर्ताहरु संधै चनाखो बन्नुपर्ने खाँचो छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ बैशाख २६
भारतीय बजारमा नेपाली बियर निर्यात् गरे नेपाललाई वार्षिक २ अर्ब नाफा; टाईगर ब्रुअरीका प्रबन्ध निर्देशक खड्का काठमाडौं । टाईगर ब्रअरीका प्रबन्ध निर्देशक तेजेन्द्रसिंह खड्काले नेपाली बियरहरुलाई […]
कांग्रेसले अझै आफूलाई नैतिकवान र लोकतन्त्रवादी भनेर कतिदिन ढाट्ने ? २०७४ साल असोज १७ गतेबाट नेपालमा बहसको एउटा विषय थपिएको छ । २००६ सालमा स्थापित भएको र पछि […]
सेयर बजारमा किन आफ्नो सेयर आफैंलाई बिक्री गरिन्छ ? हरिशरण न्यौपाने । तपाईले वाससेल भन्ने सुन्नुभएको छ । सुन्नुभएको छ वा छैन । यदि […]
चौधरी ग्रुपले कहाँ तिर्छन कर ? सरकार किन चुप ? देशका ठूला औद्योगिक घरानाहरुले स्थापना कालदेखि नै बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएको बारेमा […]
फेसबुकको फोटोमा केटालाई ‘लाइक’ डलरमा केटीलाई रुपियाँमा ! मानिसको पुस्ता जति पछाडि भयो त्यति नै भाग्यमानी । किनकि आजभन्दा तीन दशक अगाडिसम्म पनि […]
स्थानीय तहको चुनावमा “उप” मा महिला “चुप” ! महिलाहरु पुरुषका लागि “खडेबाबा” मात्रै ! पहिलो चरणमा सम्पन्न हुने सबै ठाउँमा सबै पदका उमेदवारहरु चयन भैसकेका छन् । यी सबै ठाउँमा […]